पत्रकारलाई धम्क्याउँदै एमालेहरुले मतगणना विथोल्न खोजेपछि — donnews.com
'एमालेले हारको मानसिकताले मतगणनालाई प्रभावित पार्न खोजेको सत्तारुढ गठबन्धनको आरोप'
पोखरा, ४ जेठ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ७ मा भईरहेको मतगणना नै विथोल्ने गरी नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरुले अवरोध गरेपछि समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकारहरुलाई उल्टै नेताहरुले धम्क्याएका छन् ।
एमालेका नेता दामोदर बैरागीले समाचार रिर्पोटिङमा रहेका अनलाइन खबर डटकमका गण्डकी ब्यूरो प्रमुख अमृत सुवेदीलाई धम्क्याउँदै आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई कुट्न आदेश दिएका थिए । आक्रोशित एमालेका कार्यकर्ताहरुले जसरी पनि मतगणना विथोल्ने अभिप्रायले लफडा शुरु गरेपछि भिडियो खिचिरहेका पत्रकारहरु माथि उनीहरु जाईलागेका हुन् । पत्रकारलाई झापड हान्ने र बाहिर निस्किन नदिने भन्दै उनीहरुले धम्क्याएका थिए ।
त्यसो त, एमालेको गढका रुपमा चिनिएको वडा नं. ७ को मतगणनामा कांग्रेसले शुरुदेखि नै अग्रता लिएपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा एमालेका कार्यकर्ताहरुले विभिन्न टिकाटिप्पणी गर्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका थिए । सोही क्रममा आक्रोशित भईरहेका एमालेले सुनियोजित ढंगले किचलो झिकेर वडा नं. ७ को मतगणनालाई रोक्न खोजेको आरोप गठबन्धनका दलहरुले लगाएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको हलमा भईरहेको मतगणना स्थलमा गठबन्धनका प्रतिनिधिहरुले कर्मचारीलाई थर्काएको भन्दै एमालेका कार्यकर्ताहरुले मतगणना विथोल्न खोजेका थिए । अन्य मतगणना स्थलमा समेत कब्जा गर्न खोजेका एमाले कार्यकर्ताहरुको प्रयास सुरक्षा निकायले असफल बनाएको छ ।
यस घटनाका सम्बन्धमा सत्तारुढ गठबन्धनले भने एमालेले हारको मानसिकताले मतगणनालाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।